9 × 20 Podcast: Diso Apple amin'ny HomePod? | Avy amin'ny mac aho
Vonona ny handefa ny mpandahateny HomePod vaovao i Apple ary ny mpampiasa dia te-hankafy azy io ao an-trano, ny vokatr'izany rehetra izany dia ireo mpampiasa voalohany miresaka zava-mahatalanjona an'ilay mpandahateny, maro ny hafa miandry ny fahatongavany ary ny maro hafa miandry an'i Apple hanapa-kevitra ny hivarotra azy io any amin'ny fireneny .
Na ahoana na ahoana, ny zava-dehibe dia amin'ny podcast omaly alina niresaka lava momba ny vaovao entin'ity vokatra vaovao ity izahay amin'ireo tovolahy avy any Cupertino, ankoatry ny fanehoan-kevitra momba ireo hevitra samihafa navoaka ary maneho hevitra momba ny vaovao hafa amin'ny herinandro mifandraika amin'ny tontolon'ny Apple.
Raha tianao dia azonao atao ny manaraka anay mivantana isaky ny talata alina, mivantana avy ao ny fantsona anay ao amin'ny YouTube, na miandry ora vitsivitsy, mandra-pahatongan'ny audio podcast amin'ny iTunes, toy ny mahazatra isaky ny alarobia maraina. Raha manana olana ianao, manontany na manome sosokevitra ho an'ny podcast anay dia afaka maneho hevitra momba izany ianao mivantana amin'ny alàlan'ny chat azo ao amin'ny YouTube, mampiasa ny tenifototra #podcastapple ao amin'ny Twitter na araka ny nasongadinay tany am-piandohana fantsona Telegram anay.
Ny marina dia tsara foana ny mizara ireo maraina maraina mivantana amin'ireo mpiara-miasa amin'ny Actualidad iPhone sy Actualidad Gadget, ary mihamaro ny mpampiasa manaraka anay mivantana ary manontany anay ny momba ny vaovaon'i Apple momba ny teknolojia sy ny vokatra vokariny. Faly be izahay amin'ny fandraisana ataon'ny Podcast ary mihamaro hatrany izahay ao amin'ity vondrom-piarahamonina ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » 9 × 20 Podcast: Diso Apple amin'ny HomePod?
Ny HomePod dia mety hampidi-doza ny fiainanao manokana, amin'izao fotoana izao